Dalagaa Archives - OMN
OMN:-Muuxannoo fi Mudannoo Obbo Mulunee Kakaa Kutaa 1ffaa- Caamsa 17 2020
aahassen May 17, 2020
OMN:Jawaar KFO’tti dabalamuu hordofee odeessaalee Miidiyaa hawaasaa (Mudde 31, 2019…
aahassen Dec 31, 2019
OMN: Baruumsa Qubee Afaan Oromoo Hawaasa Oromoo Magaalaa Huustoon…
OMN: Qophii Dalagaa Bitootessa 24, 2015
Amantilee Amharic News Amharic Program AOA Show Arabic News Beeksisa BOHAARTII ODAA
OMN: Qophii Dalagaa Gurraandhala 24, 2015
Qophii Dalagaa har'aa sochii mana daldala Adde Saaraa Hordofaa "Katar River Restaurant" jedhamu irratti xiyyeesffata.
OMN: Dalagaa (Ad. Tireezaa Amme, K. 2ffaa) Gurraandhala 3, 2015
Editor Feb 4, 2015
Adde Tireezaa Ammee kutaa biyyaa Minisootaa, Ameerikaa keessatti dhaabbata tajaajila kunuunsa fayyaa maanguddootaaf kennu tokko banuudhaan namoota 300 ta’aniif carraa hojii uman. Qophiin kun haala sochii hojii isaanii irratti marii godhame…
OMN: Qophii Dalagaa (Ad. Tireezaa Amme) Amajjii 27, 2015
Editor Jan 27, 2015
Adde Tireezaa Ammee kutaa biyyaa Minisootaa, Ameerikaa keessatti dhaabbata tajaajila kunuunsa fayyaa maanguddootaaf kennu tokko banuudhaan namoota 300 ta'aniif carraa hojii uman. Qophiin kun haala sochii hojii isaanii irratti marii godhame…
OMN: Dalagaa Amajjii 13, 2015
Editor Jan 13, 2015
Waa'ee sochii hojii dhaabbata isaanii "Safari income tax & Immigration service" jedhamu ilaalchisee gaaffii fi deebii Obbo Ayyub Kaayoo Ganamoo wajjin taasifame kutaa xumuuraati.
OMN: Qophii Dalagaa (Ob. Ayyub Ganamoo) Amajjii 6, 2015
Editor Jan 6, 2015
Qophiin kun, dhaabbata "Safari Income Tax & Immigration Services" jedhamu hundeessuudhaan dalagaa gaarii irra kan jiran muxannoo Obbo Ayyub Ganamoo ilaallata.
OMN: Qophii Dalagaa (Ob. Isra’eel Goobanaa) Mudde 16, 2014
Editor Dec 17, 2014
Ogeessa seeraa kan ta'an obbo Isra'eel Goobanaa wajjin gaaffii fi deebii taasifame.
OMN: Qophii Dalagaa (Inshuraansii Lubbuu) Mudde 9, 2014
Editor Dec 10, 2014
Gaaffii fi deebii haadha qabeenyaa Inshuraansii Lubbuu wajjin taasifame.
OMN: Qophii Dalagaa Sadaasa 25, 2014
Editor Nov 25, 2014
Haadha Qabeenyaa Adde Beekoo Tufaa wajjin gaaffii fi deebii taasifame.
OMN: Qophii Dalagaa (Gammadoo Jamaal), Sadaasa 18, 2014
Oromia Nov 19, 2014
Qopheessaa Filmii Afaan Oromoo "Amaanaa" Gammadoo Jamaal waa'ee filmii isaa ilaalchisee ni dubbata.
OMN: Sirna Mallattoo Kitaabaa “Yajamiilaa Innaat”, Onkololeessa 21, 2014
Oromia Media Oct 21, 2014
Barreessaan kitaaba "Yajamilaa Innaat" Gadaa Gabra'ab, waamicha Waldaa Hawaasa Oromoo Minisootaatiin godhameefin magaalaa St Paul Minisootaatti argamuun kitaabicha mallatteesseera. Qophiin kun sirna mallatteessuu kitaabichaa daawwachiisa.
OMN: Qophii Dalagaa Onkololeessa 14, 2014
Oromia Media Oct 14, 2014
Qophiin Dalagaa Oromoota biyya hambaa keessatti hojii fakkeenya ta'uu danda'u dalagan irratti xiyyeeffata. Qophiin har'a Oromoota Magaalaa St Paul, Minisootaatti wiirtuu daldalaa Awaash jedhamu banatanii daldalaa jiran ilaala.
OMN: Qophii Dalagaa (Asaantii), Fulbaana 30, 2014
Oromia Media Oct 1, 2014
Fiilmii "Asaantii" jedhamu irratti taatotaa fi qindeessitoota wajjin marii taasifame.
OMN: Qophii Dalagaa Fulbaana 23, 2014
Oromia Media Sep 24, 2014
Qophiin Dalagaa kan har'aa adde Seenaa Jimjimoo kitaaba barreesite ilaaalchisee gaaffii fii deebii godhameef irratti xiyyeffata.
OMN: Qophii Dalagaa Fulbaana 16, 2014
Oromia Media Sep 17, 2014
Qophiin Dalagaa kun kutaa lammaffaa gaaffii fi deebii barreessaa fi daayireekitarii fiilmii "Agartuu Barraaqaa" Saamsoon Maarqosos wajjin taasifamedha.
OMN: Qophii Dalagaa Fulbaana 9, 2014
Oromia Media Sep 10, 2014
Qophiin Dalagaa har'aa barreessaa fi daayireekitara fiilmii Agartuu Barraaqaa kan ta'e Saamsoon Maarqoos keessummeessa. Kutaan duraa qophii kanaa kunooti.
OMN: Qophiilee Hagayya 26, 2014
Oromia Media Aug 27, 2014
- Oduu - Qophii Dalagaa
OMN: Qophii Dalagaa Hagayya 19, 2014
Oromia Media Aug 20, 2014
Qophiilee OSFNA kan bara 2014 keessaa hirmannaan daldaltoota Oromoo tokko ture.Sagantaan Dalagaa kan har'aa kun dukaanoota gurgurtaan meeshaalee gara garaa itti-adeemsisamaa ture keessatti sochin daldalaa maal akka fakkaatu ni agarsiisa.
OMN: Qophii Dalagaa Adoolessa 22, 2014
Oromia Media Jul 23, 2014
Qophiin har'aa jiruu fi jireenya dalagataa Haasan Hamid irratti xiyyeeffata
OMN: Qophii Dalagaa Adoolessa 8, 2014
Oromia Media Jul 9, 2014
OMN: Qophii Dalagaa Waxabajjii 24, 2014
Oromia Media Jun 25, 2014
Jiruu fi jireenya Abdallaa Adam Wadaay (Shantam)